Mootummaan abbaa irree wayyaanee ilmaan Oromoo dararuufi mana hidhaatti guuruu itti fuftee jirti. | QEERROO
Mootummaan abbaa irree wayyaanee ilmaan Oromoo dararuufi mana hidhaatti guuruu itti fuftee jirti.
Posted on January 16, 2018 by Qeerroo
Gabaasa [SQ, amajji 16,2018] Baatii Fulbaanaa bara 2016 godiina wallaggaa Lixaa Aanaa mana Sibuu Ganda qottee bulaa Bengu’aa laga dhoqee jedhamu Keessa Ukaamfamun Kaambi waraana Dhidheessa jiruti yeroo dheeraaf erga reebamani booda namoonni lama kan maqaan isaanii Caalii Ejjetaafi Jamaal Tasammaa jedhaman gara Maayikalawiiti dabarfamanii dararamaa turaniiru. Maatii fi fira dhokfamuun baatti ja’a ol erga hiidhamani booda mana hidhaa Qilinxooti argamaniiru. Namoonni kunniin erga ukkaamfamanii waggaa lama kan guute yommuu ta’u, #Caali Ejjetaa abbaa ilmaan afuri,nama daldalan maatii ofii bulfaatu ture jedha odeeffannoon arganne. Dargagoo #Jamal Tasamaa oggeessa meeshaa Elektirooniksii ta’ee Yeroo dheeraa mana hidhaa waan turef dhibee garaachaa dhukubsataa akka ta’e maddeen keenya gabaasaniiru. #Caali Ejjetaa fi #Jamaal Tasamaa jaalan isaani biroo waliin bara 1993 irra qabee miseensa ABOti jedhamun yeroo garagaraati kan hiidhamaa turani fi haras yakka tokko malee mana hidhaa Qilinxooti dararamaa jiru.
Haala kanarraa ka’uudhaan dargaggoonniifi uummanni Beengu’aa mana maatii Caalii Ejjetaa deemuun akka cinaa dhaabbattan qeerroon dhaamsa isaa dabarfata.
Kana malees Eergamtichi Wayyaanee Waggaa Dheeraaf Ummata Aanaa malkaa Bal’oo Ajjeesaa ,sama ,Hidhaa fi Biyyaa Nama Baqqachiisa Ture fi Bulchiinsa Aannaa Dadar keessati Gochaa Sukkannessa Hojjacha ture Namni Jamaal Adam Jedhamuu Tarkanfii Keessa Debi Hin Qabnee kan irratti fudhaatameen Ajjesamuun gabaafame. Akkasumallee fakkaattonni isaa jiraattota rakkisaafi mootummaa wayyaanee waliin ta’uun qabeenya hawaasaa saamaafi saamsisaa turaniifi jiran hojii diinummaasaaniirraa akka dhaabbatan qeerroon akeekkachiisa dabarseera.
[SQ, amajji 16,2018] Godina Shawaa Lixaa, Aanaa Meettaa Walqixxeetti Uummatni Oromoo Aanichaa Bulchaa Aanichaa duraanii kan ture namichi Didhaa Gaarii jedhamu nu bulchuu hinqabu!’ Jechuudhaan ummatni aanichaa ofirraa ari’anii jiraachuun dhaga’ame. Namicha kana duraanillee ummatni humnaan ofirraa ariinaan mootummaan Wayyaanee dhiibbaa godhee dirqamaan akka ummata bulchuuf bakkatti deebisuutu himame.Inni ammaa kuni yeroo lammaffaaf yoo tahu, amma gargaarsa humna waraanaatiin ummataa jalaa miliqee naannicha gadi dhiisee badee jira. Namichi kuni.osoo barnoota hinqabaatin ragaa barnootaa sobaatiin ummata gowwoomsaa ture.harka mirgaa Wayyaanee tahuudhaan ummata keenya gidirsaa ture.Yeroo ammaa kanatti aanichi nama isaaf tahu bakka buusuu baatus, nama fedha ummataa guutu ummatichi ofii isaaf filachuuf qophiirra jira.”